Indlu evulekileyo yasemaphandleni eSan Galgano
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSebastian
Indlu yeplani evulekileyo ebuyiselwe ngesitayile inegadi enkulu enegadi yeziqhamo kunye ne-vine pergola ene-barbecue kunye nemibono emangalisayo phezu kwentlambo. Ifakwe kwilali kuMasipala waseChiusdino kufutshane neAbbey yaseSan Galgano.
Indlu ebuyiselwe ngononophelo igcina izinto zokuqala zerustic ixhotyiswe ngazo zonke iinkonzo kwaye inepatio ene-pergola yokutyela ngaphandle kunye nokuhlala. Indlu inokuhlala ngokukhululekileyo abantu aba-2 kwaye mhlawumbi ngokongeza ibhedi omnye umntu.
I-Intanethi iyafumaneka ngesixhobo esiphathwayo se-wifi hotspot (ekunokwenzeka ukuba uhambe nayo xa uhamba). I-Intanethi iqinisekisa i-1 gig yedatha ngosuku (24h), unokulawula ngokulula i-imeyile kunye nokusefa kodwa ayifanelekanga ukukhuphela amaxwebhu amakhulu anje ngeemuvi, umculo, njl.
Ngamaxesha abandayo, indawo yomlilo yentsimbi ye-Jotul iyafumaneka. Umthi ofunekayo uya kuhanjiswa ngeendleko ezongezelelweyo ze-euro ezingama-60 nge-cubic meter.
4.91 · Izimvo eziyi-115
Imimandla esemaphandleni yeVal di Merse neeNduli zeMetalliferous, enemilambo, amahlathi namadlelo, inokuwelwa ngeendlela ezininzi, ngeenyawo, ngebhayisekile nangokukhwela ihashe. IChiusdino enendawo kunye nesakhiwo senqaba enqatyisiweyo yamaxesha aphakathi kufanelekile ukutyelelwa kunye neCistercian Abbey entle yaseSan Galgano kunye neHermitage yaseMonte Siepi ngekrele elityeni. Kwindawo ejikelezileyo, inqaba-ilali yaseFrosini, iLuriano, iCastelletto kunye nenqaba yaseMontalcinello kufanelekile ukutyelelwa. I-Massa Marittima, i-Follonica kunye ne-Siena zifikeleleka lula (iikhilomitha ezingama-35).
Luxanduva lomnini ukuba abekhona ubuncinane ekufikeni kwakhe ukuze azise malunga nokusetyenziswa kunye nokubonelela ngolwazi olongezelelweyo. Uqhagamshelwano ngomnxeba luya kugcinwa ukusombulula naziphi na iingxaki.